InMotionNow waxay daahfureysaa socodsiinta qadka tooska ah ee E-mailka Suuqgeynta | Martech Zone
inMotionNow, Bixiyaha xalka maaraynta socodka shaqada ee suuqgeynta iyo kooxaha hal abuurka ah, ayaa soo bandhigay casriyeyntii ugu dambeysay ee badeecadeeda, inMotion, oo ay ku jiraan mid cusub muuqaalka dib u eegista loogu talagalay emaylka suuqgeynta iyo jiilka xiga UX / UI.
Qalabka dib-u-eegista emaylku wuxuu awood u siinayaa dadka isticmaala inay ka baaraandegaan emayllada meeriskooda suuqgeynta ee ay doortaan si toos ah inMotion dib u eegis iyo oggolaansho. Suuqgeynta iyo kooxaha hal abuurka ah kuma sii xayiran bixinta iyo helitaanka jawaab celinta ku saabsan ololeyaasha emaylka ee ku saabsan mawduucyada emaylka. Taabadalkeed, waxay si fudud u isticmaali karaan dib-u-eegista InMotion, iskaashiga, iyo astaamaha oggolaanshaha si ay u calaamadeeyaan emaylka sida ay u ahaan lahaayeen caddeyn daabacan.
Waxyaabaha ugu Muhiimsan ee Falanqaynta Email-ka ee Shaqeynta:
Faallooyinka degdega ah: Isticmaalayaasha waxay si toos ah ugu diri karaan emaylka tijaabada ah emaylkooda suuqgeynta suuq geynta inMotion, halkaas oo emaylka lagu kordhiyay macluumaadka ololaha isla markaana lagu soo bandhigayo qaab ahaan caddeyn ahaan in loo maro dib u eegis iyo oggolaansho.
Xaaladda Khatarta ah: Marka lagu daro daabacaadda nuxurka jirka ee emaylka ku jira jawiga dib u eegista qadka, InMotion sidoo kale waxay u soo bandhigeysaa dib-u-eegeyaasha macluumaad muhiim u ah iimayl kasta, sida khadka mawduuca, taariikhda dirista, iyo bartilmaameedka dhagaystayaasha, oo ay calaamadeyn karaan ama oggolaan karaan.
Jawaabcelin Cad Isticmaalka InMotion ee oggolaanshaha emaylka waxay ka dhigan tahay dib-u-eegeyaashu inay ka fogaadaan halganka sharraxaadda ra'yigooda ku saabsan iimaylka tijaabada ah ee laga helay sanduuqa sanduuqa, taas bedelkeedna la adeegsanayo qalab dib-u-eegis fudud oo caqli-gal ah oo ku saabsan jawiga caddaynta khadka tooska ah si ay u sameeyaan faallooyin si sahlan loo akhriyi karo iyo calaamadeyn.
Ogolaanshaha Socdaalka ah: Iyadoo la adeegsanayo barnaamijka dib-u-eegista moobiilka ee 'InMotion', dadka isticmaala waxay si dhakhso leh u ansixin karaan caddeynta emaylka meel kasta oo ay isticmaalayaan 'suulka kor' ama 'suulka hoos'.
Marka lagu daro dib-u-eegista emaylka, InMotionNow waxay leedahay muuqaal cusub oo laga dareemayo gudahaMotion. Ku xirnaanta mabaadi'da naqshadeynta maaddada la yaqaan, jiilka soo socda UX / UI waxaa loo dhisay si gaar ah suuq-geynta iyo kooxaha hal-abuurka ah si loo dardar-geliyo korsashada loona kaxeeyo wax-ku-oolnimada hay'adeed. Khibrada isticmaale ee dareenka leh waxaa loogu talagalay dadka isticmaala dhammaan awooda tiknoolajiyada, siinta marin u fududaanta astaamaha.
Waxaan si isdaba joog ah u maalgelinay ilo muhiim ah horumarinta wax soo saarka socda si aan u ilaalino booska hogaamiyaha suuqa dhexdiisa ee hal abuurka maaraynta shaqada. Cusboonaysiintaan ugu dambeeya waxay sii wadaan sibidhka'Motion 'oo ah xalka ugu fiican ee shaqada ee wershadaha. Maamulaha inMotionNow Ben Hartmere.
Iyada oo leh qaybo isku dhafan oo u gudbiya codsiyada mashaariicda, mashaariicda caddaynta, iyo caddaynta oggolaanshaha kama dambaysta ah, inMotion waxay ka hortageysaa kakanaanta aaladaha maareynta mashruuca guud, halkii ay diiradda saari lahaayeen astaamaha suuqgeynta iyo isticmaaleyaasha hal-abuurka u baahan inay sii wadaan waxyaabaha ay u socdaan.
Ku saabsan inMotionNow, Inc.
inMotionNow waa hormuudka bixiyeyaasha xalalka maaraynta shaqada ee suuqgeynta iyo kooxaha hal abuurka ah, fududeynta waxtarka iyo wax soosaarka laga bilaabo mashruuca kickoff illaa oggolaanshaha kama dambaysta ah. inMotion, oo ah shirkadda soo saarta shirkadda SaaS, waxay fududeyneysaa weji kasta oo ka mid ah hannaanka shaqo socodka hal-abuurka ah, iyadoo u siineysa qiimo lagu qiyaasi karo macaamiisha shirkadaha adduunka oo dhan. Codsigu wuxuu u oggolaanayaa daneeyayaasha mashruuca inay maareeyaan, raadraacaan, oo ay si wada jir ah u eegaan daabacaaddooda, fiidiyowgooda, iyo mashaariicda iimaylka suuqgeynta ee aagga bartamaha internetka. Iyada oo la adeegsanayo xiriir saaxiibtinimo leh iyo koox guuleysi macaamiil ah, InMotionNow waxay ka caawisaa kooxaha hal-abuurka iyo suuq-geynta nooc kasta oo ka mid ah inay qabtaan shaqada ay jecel yihiin oo ay otomatiyada inteeda kale.
Tags: ansixinansixinta emaylkaiskaashiga emaylkahabka emaylkaboosteejada dib u eegista emaylkaxatooyadainmotionnowansixinta hawsha